Luis Suarez iyo xulkiisa Uruguay oo afka labadiisa taagay kaddib dhacdadan ka qabsatay Copa America…(MUUQAAL+SAWIRRO) – Gool FM
Luis Suarez iyo xulkiisa Uruguay oo afka labadiisa taagay kaddib dhacdadan ka qabsatay Copa America…(MUUQAAL+SAWIRRO)
(America) 06 Juunyo 2016. Dhacdo yaab leh ayaa ka dhacday garoonka Phoenix Stadium, intii aan la baasan ciyaartii Copa America ee u dhexeysay Mexico iyo Uruguay kulan ay 3-1 ku adkaaday xulka Mexico.
Markii ay soo safteen xiddigaha labada xul si ay u qaadaan heesta calanka dalkooda ayaa waxaa dhacday markii la soo gaaray in la daaro heesta xulka Uruguay in loo daaray hees aan ahayn tii calankooda isla markaan si khalad ah loo daaray wax u muuqday heesta calanka ee xulka Chile oo aanba kulanka qeyb ka ahayn.
Kabtanka xulka Uruguay Diego Godin ayaa isku dayay inuu si geesinimo ah u qaado heesta calanka dalkiisa iyadoo ay jirto inay mid khaldan daaran tahay inkastoo xiddigaha kale ee xulka ay dhammaan aamusnaayeen, waxaa sidoo kale keydka ka soo muuqanayay Luis Suarez oo yaab ka muujinaya heesta loo daaray calankooda.
Taageerayaasha iyo laacibiinta Uruguay ayaa afka labadiisa la kala taagay yaab iyo amakaag laakiin markii dambe maamulka Copa America ayaa raali galin ka bixiyay arrinkan.
Warbixin rasmi ah ay soo saartay Copa America ayaa u dhaceysay sidan: “Caawa intii lagu guda jiray xafalada furintaan kulanka, sababo la xiriira khalad bani’aadam waxaan si aan ula kac ahayn u daarnay heesta calanka ee aan saxda ahayn.
“Waxaan si daacadnimo ah qaladkan uga raali galineynaa xiriirka kubbada cagta Uruguay, xulka qaranka Uruguay, dadka reer Uruguay iyo taageerayaasha.
“Waxaan ka shaqeyn doonnaa dhammaan qeybaha ku lug leh arrinkan inaan hubino in qalad ceynkan oo kale ah uusan dib u soo laaban.”.
"Euro kadib ayaan go'aamin doonaa mustaqbalkayga" - N'Golo Kante oo hadlay
Leicester City oo laga soo diiday dalab ay ka gubisay badalka Jamie Vardy